Gbasara Anyị - Baoding Xueruisha nku na Down Products Co., Ltd.
Xueruisha nku na Down Products Co., Ltd.
Anyị nọ n'otu n'ime nnukwu nku na ala ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China - Baiyang Lake, Baoding, Hebei na North China. Xueruisha Feather And Down Products Co., Ltd. nwere ahụmịhe dị ukwuu n'ịmepụta nku na ngwaahịa ala, gụnyere ala akwa, ala ohiri isi, nku na akwa ụra, akpa ụra, uwe na ndị ọzọ. Companylọ ọrụ anyị nwere usoro nke ngwaahịa na eiderdown na mmepụta nke dị puku tọn asatọ kwa afọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ịnweta Iwu China maka mbupụ. N'ihi na anyị pụrụ iche imewe na elu-edu, anyị na ngwaahịa na e rere nke ọma na America, Europe, Japan na Korea. Anyị mmepụta ike esịmde ihe karịrị nde isii iberibe kwa afọ. Anyị na ngwaahịa na-ukwuu na-atụ aro na obodo ahịa na merie ndị nwa anụmanụ nke Provincial First-Rate Product, National mbụ-Rate Product, A-eguzosi Ike n'ihe Product site Ahịa na Famous Brand nke Hebei Province na Quality. Anyị nwetara asambodo ISO9001 na 2009. "Iguzosi ike n'ezi ihe, nraranye na ihe ọhụrụ" abụwo mmụọ anyị n'ime afọ 11 gara aga. "Ezi mma, ezigbo njikwa na ọrụ maka ndị ahịa" bụ echiche ọrụ anyị.
Na 1973, onye nchoputa anyị na onye isi ala, Jianhong Liu mụrụ na ezinụlọ onye ọkụ azụ na Dazhangzhuang Village, Anxin County, Hebei Province. Liu gara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Anxin County ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ na-achọ ajị ajị anụ. Ichapu ntutu bụ ọrụ siri ike ma na-agwụ ike. Liu emeghị mkpọtụ ma ọ bụ kpọọ nke na-amị amị. O biliri n’isi ụtụtụ kelee ọchịchịrị ma rụsie ọrụ ike. O mere ngwa ngwa mere ka onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ nwee ekele na ntụkwasị obi o nwere. , Ọ na-akwalite akaụntụ na-erughị ọkara afọ.
Na 1992, na Yuan 20,000 ọ zọpụtara site na ọrụ nwa oge na nrọ nke ịmalite azụmahịa, ya na ndị enyi ya rụkọrọ ọrụ iji gaa ndịda na Guigang City, Guangxi, wee bido ịzụ ahịa ihe nkiri na ire ere. Mgbe afọ atọ nke ịrụsi ọrụ ike, na 1995, Liu dị afọ 22 nwere ọtụtụ nde isi obodo, ọ ghọrọ onye ntà nke nwe obodo Dazhangzhuang site na ezinụlọ dara ogbenye. Ọ dabere na ịrụsi ọrụ ike na ịdị uchu na-egwupụta "ite ọlaedo mbụ".
Na 1999, Liu debara aha Jinlida Down Products Factory, debanye aha ya, wee banye n'ọhịa nke mmepụta ngwaahịa. Ọ banyere n’ahịa ahụ ọtụtụ ọnwa, jiri nlezianya na-enyocha ahịa ahụ, ma na-echepụta usoro mmepụta na atụmatụ ahịa. N'ihe banyere nkà ihe ọmụma azụmahịa, anyị siri ọnwụ mgbe niile na "merie ndị ahịa na iguzosi ike n'ezi ihe na ịzụlite ahịa na amamihe". Ka ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, ọ na-eche mgbe niile banyere ya: Iji bụrụ nnukwu, ụlọ ọrụ ga-eleba anya na ahịa na ụwa.
Otu iberibe obere nku enweghị ọdịnaya teknụzụ dị ala. Liu mere ka ụlọ ọrụ ahụ sie ọnwụ na ị ga-arụ ọrụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ụwa. Ozugbo ngwaahịa ndị ahụ dara, ndị na-azụ ahịa nabatara ha wee merie "National Excellent Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", na "Consumer", "Ndị nwere ike ịtụkwasị obi na ngwaahịa ahụ", " nkwekọrịta na ntụkwasị obi "na onyinye ndị ọzọ.
Na 2003, Liu gbanwere aha Jinlida Down Products Factory na Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., wee gbasaa ụdị ngwaahịa ahụ n'okpuru akara nke "Liteshu", site na mbụ otu duvet gbadata akpa ihi ụra, Ọtụtụ ngwaahịa dị ka jaketị ala na ala cushions. Na 2005, "Liteshu" niile gafere ISO9001: 2000 asambodo njikwa njikwa mba ụwa. "Liteshu" meriri ntụkwasị obi na mma, nweta ọtụtụ iwu, wee bido ịbanye n'ahịa mba ụwa. Ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ruru ihe karịrị 100,000 iberibe afọ ahụ, ọnụ ahịa mmepụta ahụ karịrị nde Yuan 50.
Na 2006, ụlọ ọrụ "Liteshu" na France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. sonyeere aha na ịtọlite ​​Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd., wee bupụta usoro "Xueruisha".
Na May 27, 2014, Xueruisha Down Products Co., Ltd. ka edepụtara nke ọma dị ka ụlọ ọrụ mbụ na Baoding ka ọ rute na isi ụlọ nke Shijiazhuang City. N'ime afọ 20 gara aga, Xueruisha Down Products Co., Ltd. azụrụla, hazie ma ree ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 50,000; mepụta ma ree 2.2 nde ngwaahịa. Ihe ndị a niile na-eme Liu juputara na ntụkwasị obi na mmepe ụlọ ọrụ n'ọdịnihu.
N'April 1, 2017, akụkọ banyere nguzobe nke Xiong'an New District bịara. Dịka onye ọchụnta ego na-arụsi ọrụ ike site na ala, Liu Jianhong nwere ezigbo obi ụtọ maka ohere mmepe na obodo ya, n'otu oge ahụ, ọ na-eche echiche miri emi banyere otu esi etinye aka na iwu nke mpaghara ọhụrụ ahụ.
Dị ka onye isi oche nke Chamberlọ Ọrụ Azụmaahịa nke Hebei Down, Liu kwupụtara na ya ga-akwado nkwado nke iwu mpaghara ọhụrụ ahụ ma na-ebute ụzọ n'irubere mkpebi nke mpaghara ọhụrụ ahụ isi. N'otu oge ahụ, dịka ihe ndị achọrọ mpaghara ọhụrụ ahụ, yana njirimara nke mpaghara ọhụrụ ahụ, anyị ga-eme ike ọ bụla iji kwadebe maka mgbanwe na nkwalite nke ụlọ ọrụ ahụ.
Na October 25, 2020, na ọnọdụ nke mmepe ọhụụ ọhụrụ na Xiong'an New District, Anxin County Cross-border E-commerce Industry Association kwekọrọ na mmepe nke oge na mkpa ọnọdụ ahụ, n'okpuru ezi ntụzịaka nke ngalaba ime mgbanwe na ngalaba mmepe, yana ndị ọchụnta ego niile Site na nlekọta na nkwado anyị, site na mbọ niile nke ndị otu niile, emere nzukọ nzuko na nnukwu ụlọ ọrụ Xueruisha na October 25. Nke a bụ nnukwu mmemme maka upgrading na mgbanwe nke ọdịnala ọrụ aka na Xiongan New District.
Liu, onye isi oche nke Xueruisha Co., Ltd., ka a hoputara dika onye isi oche. Onye isi oche Liu kwuru na nguzobe nke mkpakọrịta ahụ bara ezigbo uru maka mmepe e-commerce Anxin na Xiong'an. Dịka onye otu ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga-ekekọrịta akụrụngwa ya, oge na ahụmịhe ya na mgbanwe nke ụlọ ọrụ, yana uru ya na ụlọ ọrụ ndị otu, ma jikọọ aka rụọ ọrụ ọrụ dị elu.
Ibu Ọrụ nke Society
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ enyela ọha mmadụ ihe karịrị Yuan nde 2 ma nyefee karịa 10,000 mkpuchi jaket. E nyere ya aha "Advanced Individual" site n'aka gọọmentị ndị ọchịchị Hebei na onyinye na agụmakwụkwọ na "Charity Enterprise" site n'aka Anxin County Charity Federation.
Akụkọ anyị ga-aga n'ihu…